Kabtan Cesar Azpilicueta Oo Dhabarka Kasii Qaniinay Lampard: “Wax Waliba Way Isbeddeleen Markii Uu Tegay” | Saxil News Network
Kabtan Cesar Azpilicueta Oo Dhabarka Kasii Qaniinay Lampard: “Wax Waliba Way Isbeddeleen Markii Uu Tegay”
Kabtanka kooxda kubadda cagta Chelsea ee Cesar Azpilicueta ayaa markii ugu horreysay sii qaniinay tababarihii shaqada laga caydhiyey ee Frank Lampard, isagoo soo faqay dhibaatadii ay kooxdu ku jirtay waqtigaas iyo sida uu u kala haadiyey Thomas Tuchel ee uu wax walba u beddelay.
Chelsea ayaa dhibaato ku dhex jirtay bishii January, waxaanay fadhiday kaalinta sagaalaad ee horyaalka, hase yeeshee markii la caydhiyey ayay kooxdu kusoo laabatay dariiqa guulaha iyadoo Isniintii uu baxayna waxay Arbacadii barbarro la gashay Wolves, ka hor intii aanay shan guulood iyo barbarro kale ku xigsiinin.
Kabtan Cesar Azpilicueta oo waraysi siiyey wargeys kasoo baxa waddanka Spain, ayaa waxa uu sheegay in ‘dareenka kooxdu uu hormaray oo ay wax walba isbeddeleen.”
Cesar Azpilicueta oo ay kooxdiisu isku diyaarinayso kulanka ay Salaasada habeen dambe la ciyaari doonaan Atletico Madrid, ayaa yidhi: “Lix usbuuc ka hor kumaanaan jirin marxalad wanaagsan. Hadda oo uu Tuchel nala joogo, wax walba horumar ayaanu ka samaynay. Dareenka kooxdu wuu wanaagsan yahay. Inkasta aanaan Premier League waxba ka qaban karaynin (Soo qabashada Man City), haddana inaanu soo gaadhno Champions League ayaa war wanaagsan ah.”
Waxa kale oo uu sheegay in kooxdiisu ay si buuxda uga soo kabatay dhibaatadii ay waqtigaas ku jirtay, waxaanu yidhi: “Isku-duubnaantii ayaa soo kabatay, fursado kooban ayaa la damaanad qaaday waxaanay taasi u hadlaysaa shaqada wada-jirka ah ee kooxda, laga soo bilaabo weerarka illaa difaaca. Iyadoo aanu haysano tababaraha cusub, waxaanu isku dayaynaa inaanu maamulno ciyaaraha marka aanu kubadda haysano iyo marka aanaan haysan ba.”
Tababarihii la caydhiyey ee Frank Lampard ayuu si toos ah uga hadlay, waxaanu yidhi: “Natiijooyinkayagu maanay fiicnayn. Frank wuxuu ahaa ciyaartoy weyn oo kubadda cagta, nasiib ayaan u yeeshay inaan la wadaago qolka labbiska iyo inuu kaddibna i tababaray, laakiin Roman Abramovich iyo maamulka kooxda ayaa ahaa kuwa go’aamiyey isbeddelka.”